सपनामा पैसा देख्नुभयो ? जीवनमा आउन सक्छ यस्तो मोड ,हुन सक्छ कायापलट ! – Sidha Post 24
हुन त सिधा अर्थ मा भन्नु पर्दा मेहनत बिना केहि छैन तर पनि मेहनत को प्रतिफल भने सबै लाई बेग्ला बेग्लै हुन्छ । यदि सपनामा मा तपाई ले सुन वा कुनै सिक्का वा रत्न देख्नु भयो भने तपाई को जीवन मा तपाई को आफन्त को सहयोग प्राप्त हुन्छ । मित्र को साथ धेरै नै पाउनु हुन्छ । यसलाई मित्रता को प्रतिक मानिन्छ ।
जीवन मा सम्पति भएर मात्र हुन्छ जो सँग आफ्नो मित्र अनि आफन्त को साथ हुन्छ त्यहि मानिस सम्पन्न र धनि हुन्छ । हामि ले सधै यो कुरा लाई ख्याल गर्नु पर्छ कि एक्लै कुनै पनि काम गर्न कठिन छ । त्यसैले साथी र सहयात्री को साथ हुन आवश्यक हुन्छ ।
यसैगरी तपाइँले केही काम अपुरा राखे पनि यी ५ वटा कर्महरु भुलेर पनि बाँकी नछाड्नुस् । यो ५ काम तपाइँले अपुरो छोड्नुभयो भने जीवनमा ठूलो घाटा हुन्छ र ठूलो भुमरीमा अझल्नुपर्ने हुनसक्छ ।यस्ता महत्वपूर्ण काम जुन तपाइले फत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ सुरु गरेपछि अत्य गर्नैपर्ने हुन्छ ।